Qaraxyo iyo weeraro ka dhacay Baqdad. Kulmiye Radio - Mogadishu, Somalia
Qaraxyo iyo weeraro ka dhacay Baqdad. 6/22/2012 2:08:00 P
| Comments() Baqdad--KNN--Weeraro iyo qaraxyo is xig xiga ayaa maanta waxa ay ka dhaceen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq. Weeraro iyo qaraxyo is xig xiga ayaa maanta waxa ay ka dhaceen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada baqdaad ee caasimadda dalka ciraaq
Mid kamid ah qaraxyada maanta ka dhacay dalka ciraaq ayaa lala eegtay goob suuq oo ku taala waqooyi bari magaalada baqdad .
Sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday xarumaha ciidamada dowladda oo ku yaala magaalada Baqdad.
Waxana weerarada iyo qaraxyada maanta ka dhacay dalka ciraaq ay sababeen dhimashada in kabadan 10 ruux iyo dhaawac kor u dhaafaya 50 ruux.
Wax ugub ma aha in qaraxyo iyo weeraro ay ka dhacaan dalka ciraaq.